ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): What I want asaBurmese National - Letter to Daw Aung San Suu Kyi by Naing Moe Aung
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 12:30 PM
very warmth welcome, touching, brilliant & thoughtful letter. Thank you dear.
ညီမလေးရေ အလုပ်ပေးတာတော့ မဟုတ်ဘူးကွာ။ သက်ဆိုင်ပြီး အဆင်ပြေမယ့်ဆီကို လွှဲပေးပါ။ အစ်ကိုတို့လဲ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေလို့ပါ။
http://messengerforbuddhist.blogspot.com <<< အတော်ကြီး ဆိုးဝါးပါတယ်ကွာ။
So you have come to the right conclusions now. Let hope Daw Su sees the situation clearly so that all Burmese abroad can go back home and work together for our country.